Stranger Things ထဲက သနားကြင်နာတတ်တဲ့ Mike တဖြစ်လဲ Finn Wolfhard ကတော့ Calpurnia လို့အမည်ပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ band နဲ့အတူတီးခတ်သီဆိုထားတဲ့ City Boy ဆိုတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုကို သူ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက် ချပြလိုက်ပါပြီ။
Hope you’ve all been enjoying City Boy!!! Click the link in our bio and while you’re there you can pick up the official City Boy shirt and Casette tape!!! The Casette has our “Wanted You” cover by the incredible @twinpeaksdudes as the B side. Our friends over at @paradyserecordings are distributing the merch to all of you in the UK/EU. Once again big thanks to @mythlessmusic for the ridiculously good cover art! Keep listening and we hope you enjoy ✌
A post shared by Calpurnia (@calpurniaofficial) on Mar 9, 2018 at 11:24am PST
Stranger Things မှာသာမက IT ဇာတ်ကားမှာပါ အနုပညာစွမ်းရည်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီးထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အားလုံးက ဝိုင်းချစ်နေရတဲ့ Finn လေးဟာ အဆိုအတီးရော ပိုင်နိုင်တာကို City Boy music video ကိုကြည့်တာနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Calpurnia Band ဟာ ခုနောက်ပိုင်းမှာ သိပ်မလုပ်ကြတဲ့ Alternative band တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်လေးယောက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ ခေါင်းဆောင်၊ပင်တိုင်အဆိုရှင် အနေနဲ့ရော Lead guitarist အနေနဲ့ရော Finn Wolfhard ကဦးဆောင်ထားပြီး Guitarist – Tesler-Mabe, Bassist – Jack Anderson နဲ့ Drummer – Malcolm Craig တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေချည်းဖြစ်ပြီး သိပ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ကြိုးစားချင်စိတ်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေချည်းပါပဲ။
We just want to sayahuge thank you to all our followers, old and new. You guys are awesome and we love you so much ❤ Can’t wait for all of you to hear our music (? @leeorwild)
The Beatles, Nirvana နဲ့ David Bowie အစရှိတဲ့ legends ကြီးတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ rocking စွမ်းရည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားကြသူတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Calpurnia အနေနဲ့ EP ထွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး သူတို့နဲ့လက်တွဲဖို့ စာချုပ်ချုပ်ထားတာကတော့ Royal Mountain Records ထုတ်လုပ်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Calpurnia အနေနဲ့ နာမည်ရလာတာဟာ Finn ပါဝင်တာကြောင့်လို့လဲပြောလို့ရသလို ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ရှိတာကြောင့်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ရဲ့ City Boy ကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်သိမှာပါ။ Rock, alternative တွေဘာတွေသိပ်နားမလည်လို့မကြိုက်တတ်တဲ့ အက်မင်တောင် သူတို့သီချင်းလေးကိုနားထောင်မိတော့ မဆိုးဘူးလို့တွေးမိတဲ့အထိပါပဲ။
ကဲ ယူတို့ရော သူတို့ရဲ့ rocking skill ဘယ်လောက်မိုက်တယ်ဆိုတာ မသိချင်ကြဘူးလားကွယ်???
Music Newsdebut singlerock band
PREVIOUS POST Previous post: ချစ်သူနဲ့ အတူလက်တွဲပြီး hiking လုပ်ခဲ့တဲ့ Taylor Swift
NEXT POST Next post: ‘Korean National Mint’ မှနေပြီး Exo အဖွဲ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရှိ